Marketing 101 • Toe Tet Online Learning Platform in Myanmar
Marketing Plan တစ်ခုရေးတတ်ဖို့ ၁၀ ရက် အချိန်ပေးပြီး Online မှ လေ့လာလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ၂၀၁၁ က စပြီး ပြည်တွင်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားပါပြီ။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာမှာ စည်းမျဉ်းတွေပြောင်းသွားပါတယ်။ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှုပုံစံပြောင်းလည်းသွားပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုပိုမိုပြင်းထန်လာပါတယ်။ ကိုယ့်စီးပွားရေးကို ကယ်တင်နိုင်တာ လူတစ်စုဘဲရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖောက်သည်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် customer တွေအကြောင်းကို သေချာလေ့လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Who are your customer ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းမမေးဘဲ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး တစ်ခု လုပ်ဆောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ယခု Marketing 101 ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Customers တွေကိုလေ့လာမှာပါ။ ဒီလိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီး တကယ်အသုံးချမယ်ဆိုရင် သမရိုးကျ လုပ်ဆောငိနေတာထက် များစွာအကျိုးပိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြားမှုပုံစံက စာတွေဘဲ သင်မှာမဟုတ်ဘဲ Theory + Practical စာတွေ့ လက်တွေ့ပါဝင်တဲ့ Online Course Workshop ပုံစံသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြားမည့် ခေါင်စဉ်များ Course Outline
1. Market Research ဈေးကွက်သုတေသန
2. Customer Profiling ဖောက်သည်ပုံပန်းသဏ္ဏန်တည်ဆောက်ခြင်း
3. STP of Marketing မားကတ်တင်းရဲ့သည်းခြေ STP (STP ကို သေချာမသုံးတတ်ရင် မားကတ်တင်းတတ်တယ်မပြောနိင်ပါဘူး)
4. Application of Marketing Mixes in your business
(7P ကို လက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးချမလည်း)
5. One Page Marketing Plan
စာချည်းထိုင်နားထောင်ရမှာမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့Activity ဖြင့် အဖွဲ့လိုက် ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင် စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ခြင်း။
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည့် Action Plan တစ်ခုထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်သက်ရှိပြီး Marketing ကိုလေ့လာလိုသော Marketing Manager များ။
Toetet Online Course မှမည်သည့် သင်တန်းမဆို စိတ်တိုင်းမကျပါက တစ်ပတ်အတွင်း 100% Fully Refund.
Dr. Phyo Paing သည် Y.E.C Education Company ကို စတင်တည်ထောင်သူ၊ Lecturer & Trainer စွန့်ဦးတီထွင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ Certified Guerrilla Marketing Coach (USA) တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် Guerrilla Marketing Coach Certification Program ကို ပို့ချပေးနေသည့် Chief Master Trainer တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
Dr. Phyo Paing သည်အသုံးချစိတ်ပညာနှင်. Marketing ကို လေ.လာခဲ.ပြီး NLP Top Coach မှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံမှ သင်တန်းသား ၃၀ ကျော်တွင် NLP Superstar ဆုရရှိခဲ.ပြီး American Board of NLP မှ အသိအမှတ်ပြု Certified Master NLP Practitioner, Certified Master Timeline therapist နှင်. Certified Master NLP Coach ဖြစ်ပါသည်။
မားကတ်တင်းနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို သင်ကြားသည်မှာ5နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး UK diploma တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားများ၊ working professionals များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို Marketing နှင့် Business Management ဘာသာရပ်များပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီတွင်ဝန်ထမ်းလုပ်ဖူးသည့်အပြင် ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေပါသဖြင့် ဘေးလူအမြင်၊ ဝန်ထမ်းအမြင်နှင့် အလုပ်ရှင်အမြင် ရှုထောင့်သုံးခုစလုံးမှ တွေးပေးနိုင်သည့်အတွက် သင်တန်းတက်ရောက်သူများအတွက် များစွာအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်မှ M.B.,B.S ဘွဲ.ရရှိခဲ.ပြီး ABE (UK) မှ Graduate Diploma in Business Management အပြင် MBA ကို ရရှိထားပါသည်။ University of Mandalay မှ စေလွတ်သည်. Asia ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည်. Indian Institute of Management ကို သွားရောက်လေ.လာခဲ.ပါသည်။
Business Management နှင်. Marketing ဘာသာရပ်များကို သင်တန်းသားပေါင်း 25000 ကျော်ကို သင်ကြားပို.ချပေးခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Interesting - 1 page marketing plan / the important of branding /4 step of marketing process & how to growth my customer lifetime value
Elizabeth San May Aung
Intetesting. Marketing Knowledge.
M 1 - Marketing 101 Introduction
M2Business and Marketing
M3Marketing 1.0 to 4.0
M4Need & Want
M5Business & Marketing Environment (PEST)
M6(3 Steps Plan)
M7Marketing Definition (Success)
M 8 Summary
M9Components of every plan
M 10 Target Market (Segmentation)
M 11 Customer Profiling (Target Market)
M 12 Targeting (Market)
M 13 Target Market
M 14 Message (Tagline)
M 15 Message & AIDA Model
M 16 Creating an ad and 30s pitch
M 17 Media (Reaching Your Prospect)
M 18 Media
M 19 Lead Capturing
M 20 Lead Capturing System
M 21 Lead Capturing 3
M 22 ( 3M + Lead generation)
M 23 Lead nurturing
M 24 Sale
M 25 Sale using NLP
M 26 Sale 3
M 27 Customer Experience
M 28 Customer Lifetime Value
M 29 Customer Lifetime Value 2
Bonus: Marketing 1.0 to Marketing 4.0
Bonus :7steps to marketing plan
Bonus: Akyanpay Introduction